China Minimalist Glass Door mkpọchi N'ihi ebughibu ụba Glass ụzọ Manufacture na Factory | YALIS
Minimalist Glass Door mkpọchi N'ihi ebughibu ụba Glass ụzọ
Ọnụ ụzọ ọkpụrụkpụ: 8-12mm
Nkịtị Mmecha: Matt nwa, Mat satin gold
N'ihi ewu ewu nke ụdị obere ntakịrị n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnụ ụzọ iko enyogoyo abụrụla ọkacha mmasị onye ọ bụla. N'ihi na okpokoro nke ụzọ ahụ tara warara dị warawara karịa warara n'ọnụ ụzọ nke obere iko ụzọ, n'ihi ya, ọ chọrọ a dị iche iche mkpọchi ahụ si nkịtị mkpọchi ụzọ ụzọ. A mụrụ usoro YALIS [GUARD] site na nke a.
Ọdịdị na-eche nche na-adịgide adịgide, ihe eji eme tubular setịpụrụ & otu ihe eji eme ya, bụ ihe nkwụsị ụzọ ọhụụ kachasị ọhụrụ na nke dị ugbu a maka ọnụ ụzọ iko ụzọ dị elu.
Ọdịdị mkpọchi ụzọ ụzọ ahụ dị warara nke YALIS bụ mkpọchi mkpọtụ kacha ọnụ ụzọ dị mkpụmkpụ. A kwadebere ya na mkpọchi ndọta magnet 60mm iji belata nnyonye anya mkpọtụ, belata ọnụ ọgụgụ ọnụ ụzọ, belata mmebi nke ọnụ ụzọ iko, ma meghee ma mechie nke ọma.
Ihe nke YALIS slim frame glass door handle mkpọchi bụ aluminom alloy, nke nwere ike ịme otu ihe ahụ ka elu ụzọ. Ejikọtara ya n'ụzọ zuru oke na ọnụ ụzọ iko, nke mere na ọhụụ ụlọ anaghị agwụ agwụ. A pụkwara ịhazi nha nke splin dị ka profaịlụ aluminom nke ọnụ ụzọ iko ahụ.
YALIS ebughibu efere iko ụzọ, Bụ a-edu ngwọta na-enye site YALIS ahịa. Ma ọ bụ ihe onwunwe nhọrọ, nkà, àgwà akara ma ọ bụ mgbe-sales ọrụ, anyị na-agbasi mbọ ike nke kacha mma. Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa otu ihe ngwaike ngwanrọ dị mfe, dị mfe ma zuru oke.
Nke gara aga: Imepụta Obere Minimalist Maka Ọnụ Profaịlụ
Osote: Matt Black ebughibu ụba Glass Door emechi mkpọchi
Ọnụ ụzọ maka ọnụ ụzọ iko
Ọnụ ụzọ eji agba iko
Glass Door emefu
Glass Door emechi mkpọchi
Mkpọchi ụzọ mkpọchi
Glass Door mkpọchi na emefu
Aka maka Glass Door
Obi Glass Door emefu
Ebe obibi Okporo Dozọ Handzọ Aka
E pedị Ọnụ Hzọ Mgbachi
Imepụta Obere Minimalist Maka Ọnụ Profaịlụ
Matt Black ịsa Door emefu Set
Ochie Anti Door Aka na Key mkpọchi